Mid ka mid ah majarafadihii Popular Snow soo jeedinta ka Richina - Shiinaha Richina
Mid ka mid ah majarafadihii Popular Snow soo jeedinta ka Richina
Culus-Duty Rolling 26-inch Snow maandooriyayaasha leh 6-inch Wheels iyo xamili hagaajin karo
The Snow maandooriyayaasha Rolling waxaa danbeeyay si ay u sameeyaan barafka dheereysa oo sahlan on dhabarka iyo garbaha. Iyada oo design this aad leedahay don`t walwalo dhaawac ka soo laabaya, tuuraya oo riixaya maxaa yeelay mooshin rogid iyo design of gacaf tiraa xanuunka Timid shoveling. Dhammaan waxay qaadataa waa weeraryahanka fudud riixaya iyo pivoting dhaqdhaqaaqa.
Iyada oo ay concave laayeen design iyo biraha xoqo, waxa tir-tiri kartaa barafka si fudud ka mid pass. majarafad The cabiraya ballaaran 26 inches by 13 inches dheer sidaa daraadeed waxa tir-tiri kartaa Jidka balaadhan oo deg deg ah waayo socodka, ama in ka badan si dhakhso badan oo gacaf dhaqameed cadeeyo galo a, si aad ku raaxaysan karaan hawlo dheeraad ah xilliga qaboobaha ama waqti badan ku bixiya riyaaqayaa diirimaad gudaha.
Xamili hagaajin lagu dhigay karaa height guud laga bilaabo 47 ilaa 51 inches jidaynayey aad doorato goob si aad naftaada ugu fiican meel. Plus, xamili waa jilicsan waayo diirrimaad dheeraad ah iyo raaxada gacanta. Intaa waxaa dheer, rogid iyo pivoting mooshinka fudud waa xushmad of 6-inch culus-waajib giraangiraha polypropylene. The giraangiraha ridged u saamaxaya in ay gacanta dhulka iyo si fudud u dhigi markooda halka aad barafka gurayso iska.
Features of maandooriyayaasha Rolling Snow ku Majarafad:
cabbir Guud: 16.5 "xamili W; 47 "- 51" H height guud ee hagaajin karo; daab: 26 "W x 13" H; giraangiraha: 6 "dhexroor x 2.5" qarada waaweyn; 9 lbs
Majarafad qoreysa xamili aluminium la kursiga, giraangiraha polypropylene iyo majarafad la biraha xoqid daab.
giraangiraha pivoting raagaya la tiixtiix jar dheeraad ah effortlessly dhexsocoto agagaarka geesaha, lugeeyo iyo kuwa laga galo.
The xamili telescoping hagaajin kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho dhererka ugu fiican ee shaqada.
xagal The istiraatiiji ah riixaya waxa ay taasi si aad u qumman istaagi kara oo aan xanuun dhabarka ama dhaawacaysa.
CASL Brands taageeray waxyaabaha ay la damaanad 1-sano soo saaraha ah ee iibsiga welwel la'aan.